भुईँकटहरलाई लिएर किन भिडे चीन र ताइवान ? - बडिमालिका खबर
भुईँकटहरलाई लिएर किन भिडे चीन र ताइवान ?
ताइवानबाट आउने भुईँकटहरमा किरा पाइएको भन्दै चीनले प्रतिबन्ध लगाएको हो । अर्थात् आयातित भुईँकटरहरुमा चीनले जैविक सुरक्षाको कारण देखाएर बन्देज लगाएको छ । जसका कारण ताइवानलाई ठूलो नोक्सानी पुगेको छ । चीन र ताइवानबीच राजनीतिक विवाद त छँदैछ, अहिले भुईँकटहरका कारण पनि विवाद चुलिएको छ । चीनले हालै ताइवानबाट आयात हुने भुईँकटहरमा बन्देज लगाएको छ ।
वास्तवमा भुईँकटरहर ताइवानी अर्थव्यवस्थाको ठूलो आधार हो । ताइवानमा धान र चिनीपछि तेश्रो ठूलो उत्पादन नै भुईँकटहर हो । ताइवान संसारमा सबैभन्दा धेरै भुईँकटरहर उत्पादन गर्ने देशमध्येको एक हो । त्यहाँ वार्षिक ४ लाख २० हजार टन भुईँकटरहर उत्पादन हुन्छ ।
तर चीनले फलमा किरा पाइएको भन्दै एकाएक ताइवानबाट हुने भुईँकटहरको आयातमा प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ । ताइवानको विदेश मन्त्रालयले भने चीनको उक्त कदमको विरोध गर्दै चीनले आफ्नोविरुद्धमा दुष्प्रचार गरेको दाबी गरेको छ । ताइवानले निर्यात गर्ने भुईँकटहरको अधिकांश हिस्सा चीनमा आयात हुन्छ । सन् २०२० मा चीनले ताइवानबाट साढे ४१ हजार टन भुईँकटहर खरिद गरेको थियो । जसको मूल्य डेढ अर्ब डलर परेको थियो ।
घोडालाई खुवाउने औषधि किन खाइरहेका छन् फिलिपिनोहरु ?
लकडाउन तोडेको भन्दै ३०० पटक उठबस, घर पुग्ने बित्तिकै मृत्यु
७३ वर्षकी यी वृद्धा आफ्ना लागि खोजिरहेकी छिन् दुलहा, छपाइन् विज्ञापन
पर्सामा कोरोना संक्रमणका कारण महिलाको मृत्यु
आज देशका विभिन्न ठाउँमा मौसम सफा
मोटरसाईकल दुर्घटना हुँदा कञ्चनपुरका १ जनाको मृत्यु, १ घाइते